Kutheni ukuThengiswa kweXesha eliSebenzayo kuye kwaBaluleke ngakumbi kwiXesha leCVV | Martech Zone
Kutheni le nto ukuThengiswa kweXesha eliSebenzayo kuye kwaBaluleke ngakumbi kwiXesha le-COVID
NgoMgqibelo, Oktobha 10, 2020 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 UHana O'Brien
Kuqinisekisiwe ukuba i-Super Bowl yonyaka wase-United States ifuna ngaphezulu 11 iiyure ezizigidi zeekhilowatt yamandla okuqhuba umdlalo ukuqala ukugqiba. I-snack brand u-Oreo wayelinde malunga neminyaka emibini ngalo mzuzu xa ingezizo zonke i-11 yezigidi ze-kilowatt-iiyure zamandla ezaziza kusebenza ngempumelelo kwaye kuya kubakho ukucima; kanye ngexesha lokuba uphawu lwenze ipunchline yabo.
Ngethamsanqa kwinkampani yecookie, kwiminyaka eyadlulayo kwiSuper Bowl XLVII, ekugqibeleni kwabakho ukungasebenzi kakuhle kwamandla okukhokelele ekucimeni kombane ebaleni. UOreo ucofe ukuthumela kokulungisiweyo kwabo weposi kwaye ndalinda ukubandakanyeka.
Ukuphuma kwamandla? Akukho ngxaki. pic.twitter.com/dnQ7pOgC
Cookie OREO (@Oreo) Februwari 4, 2013
Ukuphela kobusuku bangeCawa, iakhawunti ka-Oreo ye-Twitter yamkelwe malunga nabalandeli abayi-8,000 kwaye yaphinda yabhalwa amaxesha angama-15,000, iakhawunti yabo ye-Instagram isuka ekubeni nabalandeli abangama-2,200 XNUMX ukuya ngaphezulu. 36,000, Kwaye ndafumana ukuthandwa okuku-20,000 XNUMX kuFacebook. Ekugqibeleni, isicwangciso sika-Oreo saba yimpumelelo kwaye sabonisa indlela ebonakalayo kwintengiso yexesha lokwenyani.
Ukuthengisa ngexesha le-COVID-19
Kukho iindlela ezininzi amashishini anokuhamba ngazo malunga nokuthengisa kunye nokuthengisa iimveliso kunye neenkonzo, enye indlela ekufuneka ithathelwe ingqalelo yintengiso yexesha lokwenyani, ngakumbi kuba yindlela ekrelekrele ngendlela abathengisi ekufuneka bephendule ngayo kwiCoronavirus.
Ukusuka kumzekelo ongentla kunye nokunikezela inkcazo enzulu, ukuthengisa okwenyani yinto yenkampani ephendula ngokukhawuleza kwisiganeko sangoku nokuba kungesitetimenti, ukuphawula, okanye isenzo ngenjongo yokufumana ukubonakala, ukugcwala, okanye ukuthengisa.
Iingxelo zibonise ukuba idatha yexesha lokwenyani yenye yeefayile ze- phezulu 3 iindlela abathengisi bathe ziphuculwe kwaye zongeze ixabiso kwizicwangciso zabo. Ngoku nge-COVID-19 ekhoyo ebomini bethu kwikamva elibonakalayo, ukubandakanya ukuthengisa okwenyani okwenyani phakathi kwengxaki kwisicwangciso sakho seshishini kunokuphucula ubudlelwane phakathi kwegama lakho kunye nabalandeli, kunye nokukhulisa igama lenkampani yakho.
Ngokukodwa, iinkampani ezinkulu bezisoloko zivuna izibonelelo ze Ukuthengisa okwenyani ikakhulu ngenxa yobukho obukhulu esele benabo kwilizwe ledijithali. Xa ishishini elifana neli likhupha umyalezo ekuphenduleni kwisiganeko sangoku okanye kwintlekele, abaphulaphuli bayo abaninzi banakho ukwabelana ngomyalezo kunye nabalandeli babo, bencedisa ezi nkampani ukwandisa ukufikelela kwazo kude ngakumbi kunokuba sele inako kwindalo yendalo. ngendlela.
Ukuphendula koku, amashishini amancinci kufuneka afunde ukubambelela kwezi zicwangciso zeenkampani ezinkulu, nokuba zikwimo yezimvo kwizithuba zabo okanye ukwaba umxholo wabo njengendlela yokutsala iinkampani ezinkulu ezikhoyo kubaphulaphuli kumaqonga akho.
Iingcebiso zeNtengiso yeXesha langempela
Ngokuqhelekileyo kulula kwiinkampani ezinkulu ukuba zenze impumelelo iindlela zangempela zokuthengisa ukwandisa ukufikelela kwabo kunye nabaphulaphuli abasele bekhona, ngelixa amashishini amancinci aya kudinga ukuthatha iindlela ezahlukeneyo zokunceda ukuzazisa. Ngokudibana nokufunda kunye nokulandela iindlela ezenziwe ngamashishini amiselweyo, apha ngezantsi zimbalwa iingcebiso ekufuneka uziqwalasele xa usenza iqhinga lakho lokuthengisa lokwenyani ngexesha leshishini lakho:
Yiba ujonge ngaphandle -Umzuzu omnye umsitho unokuthi uqhubeke kwaye olandelayo ube sele usihla ezantsi. Inkampani yakho iya kudinga ukuba ibe nesilumkiso esiphezulu ukuba ifuna ukwenza ngempumelelo ukuthengisa okwangoku. Oku kunokubandakanya ukuseta izilumkiso zikaGoogle okanye amanye amaqonga olumkiso eendaba kwizihloko ezithile ishishini lakho elinokufuna ukuzigubungela. Oku kuya kunceda uphawu lwakho lube lolokuqala ukwaziswa kwiimeko ezintsha kunye neziganeko. Enye indlela kukulandela abachaphazeli okanye ezinye iinkampani kwicandelo lakho ezinokuthi zigubungele izihloko ezifanayo nezeshishini lakho. Ukuba khange ukwazi ukubamba iindaba zamva nje, kunokwenzeka ukuba umntu omlandelayo uza kuthi; kwaye usenalo ithuba lokwenza ngokukhawuleza ngesicwangciso sakho sentengiso.
Yiba nezixhobo -Inkampani yakho enemithombo elungiselelwe ilumkile xa ithengisa ngexesha le-COVID-19. Kunganzima kakhulu ekuziphatheni kwabathengi okusoloko kuguquka ekuphenduleni kule micimbi, kodwa ukuba nomxholo olungele ukuhamba kuya kunceda ukufezekisa isicwangciso-qhinga sakho sentengiso sokwenyani, njengoko kubonisiwe ngaphambili ngu-Oreo
bandakanya -Ukuba inkampani yakho igqiba ekubeni ithathe inxaxheba kwintengiso yexesha-lokwenyani, kuya kufuneka ulungele ukubandakanya abaphulaphuli bakho abanokuthi baphendule kwaye basabele kumxholo wakho. Umzekelo, ukuba ishishini lakho lithathe isigqibo sokwenza iposi kwindlela olusingatha ngayo ubhubhane wangoku kunye nezikhuselo ezikhoyo, kuya kufuneka ulungele ukuphendula imibuzo yabathengi ngokunxulumene neenkcazo zakho njengoko oku kuya kudala ukuthembana phakathi kwegama lakho kunye nabathengi.
Yenza ubuGcisa -Ngaphandle kwe-COVID-19 echaphazela i-eCommerce xa yayiqala, ngoku lixesha lokuba amashishini azenzele uyilo kunye neendlela ezintsha ezinje ukuhanjiswa kwemixholo yevidiyo ukutsala abathengi. Iinkampani ngoku zinethuba lokubonisa ubuntu bazo kunye nokufikelela kubathengi kwinqanaba elinzulu. Nokuba kungenxa yehlaya elihlekisayo okanye uvelana nengxaki, ukwenza ilizwi kwi-brand yakho kunokuzidibanisa nabaphulaphuli bakho.
Amashishini kufuneka azithathele ingqalelo ezi ngcebiso xa esenza ezabo iindlela zeshishini. Kuya kufuneka ukuba bayazi imiceli mngeni eza nale ndlela kuba ukuthengisa okwenyani ngexesha le-COVID-19 kunokuba nzima ukukwenza ngaphandle kokuphendula ngokukhawuleza, idatha efumanekayo kunye nolwazi oluqinisekisiweyo ngesihloko.
Abathengi, ngenxa yoko, baphele bephulukana nokuthembeka kunye nokunyaniseka kwiimpawu ezivelise umxholo ongachanekanga kwimicimbi enzulu. Uhlobo lwakho lwentengiso kufuneka lwenze uphando oluchanekileyo ngaphezulu kokuvelisa ngokukhawuleza umxholo ukuba bafuna isicwangciso sabo siphumelele.
Idatha yeXesha leNene ibalulekile
Iinkcukacha-manani ezintsha kunye nolwazi luphuma yonke imihla ngokubhekisele kwi-COVID-19, rhoqo inika amashishini ithuba lokusebenzisa iindlela zokwenyani zexesha lokuthengisa. Le yingxaki ekufuneka iinkampani zingayikhathaleli ukunceda ukwakha ubudlelwane nabaphulaphuli babo obunokuhlala ixesha elide emva kokuba iziphumo ziye zancipha. Ukuqukumbela, ukuthengisa okwenyani okwenziwe ngokuchanekileyo kunokukhokelela kwiziphumo ezilungileyo ngexesha lemeko ekuyo.
tags: i-covid-19ukuthengisa okunempembeleloiingcebiso zokuthengisaoreoidatha yexesha lokwenyaniUkuthengisa okwenyaniiindlela zangempela zokuthengisaImidiya yokuncokolaTwitter
UHannah O'Brien ubhalela iarhente yentengiso yedijithali Aumcore, egxile ekuveliseni amava edijithali aphambili abhangqwe sisicwangciso sentengiso esingaphezulu.
U-Oribi: Akukho Khowudi yokuHlaziya ukuThengisa kunye neempendulo ozifunayo ukuze ukhulise ishishini lakho